Mandra-pahoviana i Garth Brooks sy Trisha Yearwood no nanambady? Ao anatin'ny fifandraisan'izy ireo sy ny fanambadian'izy ireo - Pop-Kolontsaina
Mandra-pahoviana i Garth Brooks sy Trisha Yearwood no nanambady? Ao anatin'ny fifandraisan'izy ireo sy ny fanambadian'izy ireo
Mpihira amerikanina mpihira Garth Brooks ary Trisha Yearwood dia nanatrika ny Kennedy Center honors faha-43 vao tsy ela akory izay. Ny hetsika fanao isan-taona dia nokarakaraina isan-taona hanomezam-boninahitra ny fandraisan'anjaran'ny mpanakanto avy amin'ny sehatry ny fampisehoana zavakanto.
Garth Brooks dia iray amin'ireo mpanakanto voahaja tamin'ity taona ity, niaraka tamin'i Dick Van Dyke, Debbie Allen, Midori, ary Joan Baez. Nanome voninahitra ny fotoana niaraka tamin'i Trisha vadiny izy, ary nandefa sary niaraka taminy aza nidera ny medaly ho an'ny voninahitra tao amin'ny Instagram.
Lahatsoratra zarain'i Garth Brooks (@garthbrooks)
Araka ny The Hollywood Reporter , mpilalao an-tsehatra Bradley Cooper nidina an-tsehatra hampahafantatra an'i Garth Brooks ho lehilahy nanetry tena indrindra hatrizay.
Misy mozika any ambanivohitra, rock, filazantsara, honky-tonk, ary avy eo misy an'i Garth Brooks. Garth dia mpamono herinaratra, izay nibolisatra ho an'ireo fefy ary nanaparitaka ireo sakana teo amin'ireo karazana mozika, nanitatra ny voambolana mozika an-tanindrazana sy nanova ny kolontsaina amerikana.
Ho ampahany iray amin'ny fanomezam-boninahitra dia nanarona ireo naman'i Garth any amin'ny toerana ambany i Jimmy Allen, nihira ny The River i James Taylor, ary i Gladys Knight dia nanao ny «We Should Be Free». Ilay mpihira mpihira Kelly Clarkson dia nampindrana ny feony hihira ny hirak'i Brooks ny laharana malaza indrindra The Dance.
Nipetraka teo akaikin'ny Trisha Yearwood ilay zaza 59 taona nandritra ny hetsika. Hita fa nifindra izy roa nandritra ny fanomezam-boninahitra. Nientam-po mihitsy aza ilay mpitendry mozika satria nanohy nandatsaka sy nihoby tamin'ny fampisehoana nandritra ny alina ny fanomezam-boninahitra.
ahoana no hilazana raha tsy ao aminao izy
Garth Brooks sy Trisha Yearwood dia niseho ho mpiara-miasa tao amin'ny fizarana The AMIN'I Asehoy Ireo mpivady, nanambady nandritra ny 15 taona mahery, dia nizara ny fitiavana sy ny fanambadiana tamin'ilay fampisehoana.
Vakio ihany koa: Fa maninona i Christina Haack sy Ant Anstead no nisara-panambadiana? Ny zava-drehetra momba ny fanambadian'izy ireo nandritra ny roa taona sy ny fisarahana
Jery ​​todika amin'ny fifandraisana sy ny fanambadiana Garth Brooks sy Trisha Yearwood
Samy mizara ny iray amin'ireo tantaram-pitiavana mamy indrindra amin'ny tontolon'ny mozika ireo mpanakanto roa ireo. Ireo mpitia mpitia namana dia nihaona voalohany nandritra ny fandraisam-peo studio tamin'ny taona 1987. Nanambady an'i Sandy Mahl i Garth Brooks, ary i Trisha Yearwood dia nanambady an'i Christopher Latham rehefa nihaona izy ireo.
Nifandray tsara ny duo ary lasa mpinamana avy hatrany. Izy ireo koa dia niara-niasa tamina tetikasa marobe nandritra ny taona maro. Brooks sy Yearwood aza dia nahazo mari-pankasitrahana Grammy ho an'ny fiaraha-miasa tsara indrindra amin'ny firenena iray hafa.
Tao anatin'ny tolona manokana sy matihanina isan-karazany dia nijanona ho mpinamana i Garth Brooks sy i Trisha Yearwood.
Vakio ihany koa: ARMY mankalaza ny BTS 'Butter mihoatra ny 300 tapitrisa ny fahitana ao anatin'ny roa herinandro
Tamin'ny taona 2000 dia nisaraka tamin'ny vadiny voalohany i Sandy. Niantso izany i Trisha niaraka tamin'i Christopher vadiny voalohany ary i Robert Reynolds vadiny faharoa tamin'izay.
Tamin'ny 2002, niara-nanatrika ny karipetra mena tao amin'ny Hall of Fame Awards Induction miaraka izy roalahy. Fotoana fohy taorian'izay dia nanambara ampahibemaso momba ny fifandraisan'izy ireo izy mivady.
Tamin'ny volana Mey 2005 dia gaga ny olona rehetra i Garth Brooks rehefa nanolo-kevitra an'i Trisha Yearwood nanoloana olona 7000 izy nandritra ny fisokafan'ny sarivongana halimo tao amin'ny Crystal Palace an'i Buck Owen. Ity farany dia nizara tamin'ny US Weekly Nentina niverina tampoka izy na dia nilaza aza fa eny.
Nasainy naseho tamin'ny alina ny sarivongana, ary nisy peratra mariazy teo amboniny. Ary toy ny hoe: ‘Hey, nanao hadisoana ry zareo teto.’ Ary hoy izy avy eo: ‘Hijoro mandrakizay ity. Tiako ny peratra mariaziko amin'i Trisha amin'izany. '
Ny mpivady namatotra ny fatotra tamin'io taona io ihany ary mijoro ho iray amin'ireo mpivady matanjaka indrindra amin'ny indostria ankehitriny. Nandritra ny fisehoan'i Ellen farany teo, nampiasa fampitahana mozika i Garth Brooks hiresaka momba ny fiainam-panambadiany.
Mieritreritra aho fa tokony hitondranao azy toy ny duet ianao. Tokony hifanaraka ianao. Tokony hataonao tsapanao fa toa kintana izy ireo. Ary, raha tsy izany, ianao dia hivadika fihetsika solo tena haingana, raha fantatrao ny tiako holazaina. Miresaka momba ny irery fiddler, bass solo izahay.
Nandritra ny ady vao haingana nataon'i Trisha Yearwood niaraka tamin'ny COVID, ny vadiny dia niditra tao amin'ny Facebook mba hizara fa manomboka sy mifarana miaraka aminy ny tontolony ary nivoady izy ireo fa hiara-handalo ireo fotoan-tsarotra miaraka.
Garth dia mizara zanaka telo, Taylor (28), Aogositra (26), ary Allie (24), miaraka amin'i Sandy, vadiny taloha. Na dia mbola tsy mizara zaza aza izy sy Trisha dia tena akaiky ny zanany vavy izy.
Vakio ihany koa: Kylie Jenner handefa tsipika zazakely rehefa mametraka ny mari-pamantarana ho an'i Kylie Baby, bouncer to losion, izay rehetra antenainao
Ampio Sportskeeda hanatsara ny fandrakofany ny vaovao momba ny kolotsaina pop. Raiso izao ny fanadihadiana mandritra ny 3 minitra
inona no heverina fa mamitaka olona
hafiriana i john cena no nitolona
ny fomba tsy ho raiki-pitia mora foana